SAWIRO;-Caasimadda Eritrea oo lagu daray diwaanka goobaha Taariikhiga ah Ee Dunida - Ceelhuur Online
Home > Wararka Dibadda > SAWIRO;-Caasimadda Eritrea oo lagu daray diwaanka goobaha Taariikhiga ah Ee Dunida
July 11, 2017 Saadaq Laki477
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan dhaqanka ee UNESCO ayaa Asmara ku dartay diwaanka goobaha astaanta u ah aathaartii hore ee dhaxalka aadanaha ee dunida. Waxaa magaalada wali ku yaalla dhismayaal qaddiimi ah oo uu dhisay Taliyaaniga intii uu gumeysanayay dalkaasi (1889-1941).
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan dhaqanka ee UNESCO ayaa Asmara ku dartay diwaanka goobaha astaanta u ah aathaartii hore ee dhaxalka aadanaha ee dunida. Waxaa magaalada wali ku yaalla dhismayaal qaddiimi ah oo uu dhisay Taliyaaniga intii uu gumeysanayay dalkaasi (1889-1941)
Unesco waxay sheegtay in Asmara ay tusaale u tahay xilligii casriyeynta ee qarnigii 20-aad
Mas’uuliyiinta Eritrea ayaa 2001 ku dhawaaqay in magaalada ay tahay taallo Qaran. Waxayna tan iyo markaasi olole ugu jireen in magaaldaasi ay hesho aqoonsi caaalmi ah
Ilaa iyo 400 oo dhisme noocan oo kale oo casri ah ayaa ka badbaaday colaad toban sano socotay oo dhexmratay Itoobiya iyo Eritrea.
Waxaa dhismayaashaasi ka mid ah Fiat Tiaglero oo ahaan jirtay kaalin shidaal oo loo dhisay sida diyaarad. Waxaa la dhisay 1938. Hadda waa dhisme maran.
Wakiilka Eritrea ee Unesco, Hanna Simon, ayaa sheegay in go’aanka hay’adda uu magaalada ku abuuray farxad ballaaran balse ay sidoo kale ka dhigan tahay mas’uuliyad culus.Dhismaha xarunta dhexe ee boostada waxaa la dhameystiray sanaddii 1916.
In Unesco ay ku dartay diwaanka dhismayaasha dhaxgalka ah waxay ka dhigan tahay in hay’addu ay qaadi doonto tallaabooyinka ay ku badbaadineyso haddii dhismayaashaas qadiimiga ah ee Asmara ay khatar la soo gudboonaadaan.
Dr.Gacal oo loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug
January 17, 2020 Duceysane
Xildhibaan maanta lagu doortay Magaalada Muqdisho